भो ! अब पुग्यो निषेधाज्ञा - नेपालबहस
भो ! अब पुग्यो निषेधाज्ञा
२३ भदौ, काठमाडौं । तीनसातादेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा लम्बेला वा मोडालिटी परिवर्तन गरिएला ?धेरैको जिज्ञाशा छ । भोलि रातिबाट सकिने यो चरणको निषेधाज्ञालाई अब यही रुपमा लैजान कठिन भएको देखिएको छ । निषेधाज्ञाको अवज्ञा हुन थालिसकेको छ । सामान्य मजदूरी गरेर खानेहरुका लागि निषेधाज्ञा यसअघिको लकडाउन भन्दा चर्काे देखिएको छ । त्यसैले सडकमा ट्याक्सीलगायत मानिसको चहलपहल बाक्लिएको छ ।
नागरिकलाई घरभित्र थुनेर राख्दा कोरोना भाइरससँगको युद्ध जितिने भ्रममा परेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकका लागि केही पनि राहत दिएको छैन । एक छाक मात्रै खाएर घरमै थुनिएका नागरिकले अब प्रश्न गर्न थालेका छन्– खै त संक्रमण घटेको ? राजधानीलगायत देशैभरि संक्रमण फैलने क्रम यथावत छ । मृतकको संख्यापनि तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सरकारसँग कुनै कार्ययोजना छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली बेला बेला भाषण गर्छन् – अब कुनै नागरिकले भोकै मर्नुपर्दैन । उनी बालुवाटारमा मानिस भेला गराएर यस्तो उद्घोष गरिरहँदा हजारौं मानिस खानै नपाएर फेरि भारत फर्कन विवश छन् । अहिले झण्डै एकलाख मानिस भारतमा दैनिक कोरोनाबाट संक्रमित भइरहेका छन् । तर पश्चिम नेपालका गरिब जनता चाडबाडको मुखैमा पनि पेट पाल्नैका लागि मसिना लालाबाला च्यापेरै भारत जान बाध्य छन् ।
कोरोना कहरले आत्तिएर नेपाल फिरेकाहरु फेरि ठूलो जोखिम मोलेर भारत फर्कनु भनेको ओली सरकारको असफलता हो । युवा जनशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी वा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा जोड्न सकेको भए देशले राम्रो प्रगति गर्न सक्थ्यो । तर ओली सरकारका संयन्त्रले त्यो दिशामा कुनै ध्यान दिएन । बरु फेरि फर्केर लाहुरै जाउन भन्ने नीतिलाई उसले प्रश्रय दिँदा यो हविगत भएको हो ।
त्यसैले नागरिकलाई थुनेर मात्रै राख्दा उल्टो भोकले मार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । राजधानीमा त यसको प्रभाव अझै तीब्र छ । लकडाउनका बेला घर गएका लाखौं मजदूर राजधानी भित्रिएका छन् । उनीहरुलाई निषेधाज्ञाको नाममा फेरि थुन्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हो भने विद्रोहको नयाँ रुप देखिन सक्छ । खानै नपाउने अवस्था आएपछि मानिस बाध्य भएर सडकमा ओर्लन्छ । सर्वसाधारण सडकमै ओर्लने अवस्था आयो भने संक्रमणको भयावह अझै कडा हुन सक्छ । त्यसैले अब भने निषेधाज्ञाको स्वरुप बदल्नै पर्छ ।
आम नागरिकलाई विस्तारै कोरोनासँगै जोगिएर बाँच्ने शिक्षा आवश्यक छ । कोरोनाविरुद्ध खोप तयार नभएसम्म कोरोनासँग सचेतनाका साथ जोगिनुको विकल्प छैन । त्यसैले भारत जस्तो मुलुकले लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाउनेतिर धेरै ध्यान दिएनन् । अमेरिका युरोपमा त संक्रमण अझै भयावह छ । तर मानिस जोगिएर दैनिकी चलाइरहेका छन् ।
जतिसुकै गरेपनि संक्रमण कुनै न कुनै रुपमा फैलने रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अब तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउने र सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउनेतिर सोच्नु जरुरी छ । नत्र सडकमा ठूलै विद्रोहको ज्वारभाटा उत्पन्न हुन सक्छ ।
मनसुन शुरु भएयता गण्डकीमा १२६ जनाको मृत्यु ६ मिनेट पहिले